I-Toujeo vs Lantus: Umehluko Omkhulu nokufana - Izidakamizwa Vs. Umngani | Julayi 2021
Umphakathi, Ukuphila Kahle Inkampani Inkampani, Izindaba Umphakathi Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Umphakathi, Inkampani Inkampani, The Checkout Imininingwane Yezidakamizwa Imfundo Yezempilo, Izindaba Cindezela Ukuphuma Imfundo Yezempilo Inkampani, Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Izindaba, Wellness
Main >> Izidakamizwa Vs. Umngani >> I-Toujeo vs Lantus: Umehluko Omkhulu nokufana
UToujeo noLantus bangama-insulins amabili asebenza isikhathi eside akhonjiswe ukwelapha ushukela wegazi ophakeme kulabo abanesifo sikashukela. I-insulin yihomoni ebalulekile edingekayo ukuguqula ushukela emzimbeni wakho ube ngamandla. Abantu abanesifo sikashukela bangaba noshukela omningi egazini labo kunokujwayelekile okungadala ezinye izinkinga ezinso, emithanjeni yegazi nasenhliziyweni.
Kokubili iToujeo neLantus ziqukethe isithako esisebenzayo esifanayo, i-insulin glargine. Kodwa-ke, banokunye umehluko esizoxoxa ngakho ngokuqhubekayo.
I-Toujeo yaqale yamukelwa e-US ngonyaka we-2015. Kuboniswa ukuthi kuthuthukisa ukulawulwa kwe-glycemic kubantu abadala abanesifo sikashukela. I-Toujeo iyi-insulin ekhishwa kancane kancane ethatha amahora angama-6 ukukhiqiza imiphumela yokwehlisa ushukela. Imiphumela evela eToujeo ingahlala emahoreni angama-36 ngemuva kokuphathwa. Kuthatha izinsuku ezifika kwezingu-5 ukufinyelela esimweni esizinzile futhi kunempilo engamahhafu azungeze amahora ayi-19.
IToujeo igxile kakhulu uma iqhathaniswa neLantus. Itholakala njengomjovo wama-unit amayunithi angama-300 / ml nge-1.5 mL noma i-3 mL SoloStar ipeni eligcwalisiwe. UToujeo ujojowe ngaphansi kwesikhumba ngasikhathi sinye nsuku zonke.
ILantus yaqale yamukelwa ngo-2000. Ngokungafani neToujeo, iLantus ikhonjiswa ukuthi ithuthukisa ukulawulwa kwe-glycemic kubantu abadala kanye nezingane ezinesifo sikashukela. Imiphumela evela eLantus ingazwakala kuze kufike emahoreni ama-4 ngemuva kokuphathwa futhi ifike emahoreni angama-24. ILantus ibuye ifinyelele esimeni esisheshayo kuneToujeo ezinsukwini ezingama-2-4 ngemuva komthamo wokuqala.
ILantus itholakala njengesixazululo esingu-100 units / mL kusibaya esigcwalisiwe seSoloStar njengeToujeo. Kodwa-ke, ibuye ize nezitsha ze-10 mL zokusetshenziswa ngomjovo. ILantus ijwayele ukukhishwa kanye nsuku zonke ngasikhathi sinye nsuku zonke.
Toujeo vs Lantus Side by Side Ukuqhathanisa
I-Toujeo neLantus zingama-insulins amabili anokufana nokuhluka okuningana. Lezi zici zingahlolwa kuthebula lokuqhathanisa elingezansi.
Thayipha 1 sikashukela mellitus
Thayipha i-2 yesifo sikashukela
Imiphumela emibi ejwayelekile
Ukuphendula kwesayithi lokujova
Ukuqina kwesikhumba noma imigodi endaweni yokujova (lipodystrophy)
Ukuvuvukala kwezandla nezinyawo
Ingabe kukhona okujwayelekile?
Akukho okujwayelekile okutholakalayo
Ngabe ihlanganiswe umshwalense?
Iyahluka kuya ngomhlinzeki wakho
Inani lentengo emaphakathi
$ 432.18 ngamathathu ama-1.5 ml amapeni (amayunithi angama-300 / ml)
$ 290 (ngamayunithi ayi-1, 10, 100 / ml)
Intengo Yesaphulelo Esingabodwa
Imishanguzo yomlomo elwa nesifo sikashukela
I-Angiotensin iguqula i-enzyme (ACE) inhibitors
I-Monoamine oxidase (MAO) inhibitors
Ama-Sympathomimetic agents (i-epinephrine, albuterol, terbutaline)
I-beta-blockers (i-metoprolol, i-nebivolol)
Ngingakwazi ukusebenzisa ngenkathi ngihlela ukukhulelwa, ngikhulelwe, noma ngincelisa ibele?
UToujeo usesigabeni sokukhulelwa B. Akubeki ubungozi bokulimala kombungu. Xhumana nodokotela mayelana nezinyathelo okufanele uzithathe uma uhlela ukukhulelwa noma ukuncelisa ibele.
ILantus isesigabeni sokukhulelwa B. Akubeki ubungozi bokulimala kwengane. Xhumana nodokotela mayelana nezinyathelo okufanele uzithathe uma uhlela ukukhulelwa noma ukuncelisa ibele.
Kokubili iToujeo neLantus yizindlela ezingasebenza zokwelapha ushukela wegazi ophakeme oshukela. Womabili ama-insulins asebenza isikhathi eside okusho ukuthi angadosiwa kanye nsuku zonke ukuze kukhishwe i-insulin ngokungaguquguquki. IToujeo igxile kakhulu kuneLantus futhi iza ngamandla amabili epeni eligcwalisiwe lokuphatha okulula. ILantus itholakala njengepeni eligcwalisiwe kanye nesisombululo se-vial esingalawulwa ngesirinji. Iphinde yamukelwa ukuthi isetshenziswe kwezinye izingane kanti iToujeo ivunyelwe kuphela kubantu abadala abaneminyaka eyi-18 nangaphezulu.
IToujeo ikhishwa kancane kancane futhi kubikwa ukuthi inemiphumela ehlala isikhathi eside uma iqhathaniswa neLantus. Kodwa-ke, womabili ama-insulins anengozi ye-hypoglycemia njengawo wonke amanye ama-insulins. Ngakho-ke, kubalulekile ukuqapha ushukela wegazi ngokungaguquki ukuvimbela lo mphumela omubi.
Kukonke, ngokuya ngesimo nobudala, iToujeo noma iLantus ingasetshenziselwa ukuhlinzeka nge-insulin ende esebenza nsuku zonke nsuku zonke. Ngenkathi zombili zinikezwa ngokufanayo futhi zinemiphumela efanayo efanayo, kubalulekile ukuxoxa ngokungafani kwazo nodokotela wakho. Sebenzisa lolu lwazi njengokuqhathanisa ukuthola ukuthi iyiphi i-insulin engakulungela.
izinga elijwayelekile likashukela egazini lengane engenaso isifo sikashukela
Wenzani uchwepheshe wekhemisi?
yimuphi umuthi omuhle wokukhwehlela nge-phlegm
ungakhokha kanjani izikweletu zezokwelapha ngaphandle komshwalense
kudlulisa amahlule egazi ejwayelekile ngesikhathi sokukhulelwa
kufanele ushukela wegazi ube yihora eli-1 ngemuva kokudla